မွန်ပြည်သစ်ပါတီဥက္ကဌ နိုင်ထောမွန်နှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းချက် > မွန်သတင်းအေဂျင်စီ
Home / မေးမြန်းချက် / မွန်ပြည်သစ်ပါတီဥက္ကဌ နိုင်ထောမွန်နှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းချက်
မွန်ပြည်သစ်ပါတီဥက္ကဌ နိုင်ထောမွန်နှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းချက်
မွန်သတင်းအေဂျင်စီ June 8, 2016 မေးမြန်းချက် Leaveacomment 484 Views
ရေးသားသူ: ဗညားအောင် > မေးမြန်းချက်
မွန်နိုင်ငံရေး ၂ ပါတီပေါင်းစည်းရေးအတွက် မွန်ပြည်သစ်ပါတီကြိုးပမ်းလုပ်ဆောင်သွားမည့်အကြောင်း မွန်ပြည်သစ်ပါတီဥက္ကဌ နိုင်ထောမွန်အား မွန်သတင်းအေဂျင်စီ MNA အယ်ဒီတာ ဗညားအောင် ဇွန်လ ၅ ရက်နေ့တွင် မွန်ဘာသာဖြင့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းချက်ကို မူရင်းအတိုင်းဘာသာပြန်ဆိုသည်။
(ဝဲမှယာ) မွန်သတင်းအေဂျင်စီ အယ်ဒီတာနှင့် မွန်ပြည်သစ်ပါတီဥက္ကဌ တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်း(MNA)
ဗညားအောင်- ပြည်တွင်းက အဓိကအင်အားကြီး မွန် ၂ ပါတီပေါင်းစည်းနိုင်ဖို့ မွန်ပြည်သစ်ပါတီကြိုးပမ်းလုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်၊ ဒီနေရာမှာ မွန်အမျိုးသားပါတီ MNP က မွန်ပြည်သစ်ပါတီ NMSP ရဲ့ မဟာမိတ်ပါတီဖြစ်နေပြီးတော့ မွန်ဒေသလုံးဆိုင်ရာ ဒီမိုကရေစီပါတီ AMDP ကျတော့ မဟာမိတ်ပါတီမဟုတ်ဘူး၊ ဒီအနေအထားအပေါ်မှာ ဥက္ကဌကြီးအနေနဲ့ ဘယ်လိုရှင်းလင်းပြောဆိုချင်ပါသလဲ?
နိုင်ထောမွန်- ဒါက ပြည်တွင်း မွန်နိုင်ငံရေးပါတီ တစ်ပါတီပဲရှိသင့်တယ်လို့ ကျနော်တို့ရှုမြင်ထားတယ်၊ မွန်တစ်ပါတီတည်း မဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက် ပြီးခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာ မဲတွေကွဲပြီး အရှုံးနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်၊ ကျနော်တို့မြင်တာက ဥပဒေဘောင်အတွင်းတိုက်ပွဲမှာ မွန်ပါတီတစ်ရပ်ပဲရှိသင့်တယ်၊ သံဃာတော်တွေ အကြံပေးချက်နဲ့အတူ ကျနော်တို့ဗဟိုကော်မတီအစည်းအဝေးမှာလည်း မွန်တစ်ပါတီဖြစ်စေဖို့ ဆုံးဖြတ်တယ်၊ ဒီကိစ္စကို ဗဟိုကော်မတီအနေနဲ့ မွန်ပြည်သစ်ပါတီ ဦးဆောင်ဖို့ သဘောတူကြတယ်၊ တစ်ပါတီဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ ဖွဲ့လိုက်ပြီး သံဃာတော်တွေနဲ့ တိုင်ပင်နေဆဲပါ၊
မဟာမိတ်ကိစ္စကို ပြောရမယ်ဆိုရင် ၁၉၉၅ ခုနှစ် နဝတအစိုးရနဲ့ အပစ်ရပ်ပြီးကတည်းက ယခင်က မွန်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ MNDF ကနေ အခုဖြစ်လာတဲ့ မွန်အမျိုးသားပါတီ MNP ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ ကျနော်တို့ မွန်ပြည်သစ်ပါတီ ခေါင်းဆောင် ဥက္ကဌကြီးနိုင်ရွှေကျင်၊ ဥက္ကဌနိုင်ထင်တို့ မဟာမိတ်ဖွဲ့ခဲ့ကြတာပါ၊ သူတို့နိုင်ငံရေးမူဝါဒလမ်းစဉ်တွေက မွန်ပြည်သစ်ပါတီနဲ့အတူတူ တစ်ထပ်တည်းလိုလိုဖြစ်နေပါတယ်၊ မဟာမိတ်ပါတီအဖြစ် ခေါင်းဆောင်တွေအသိအမှတ်ပြုထားခဲ့သလိုပဲ ကျနော်တို့လက်ထက်မှာလည်း မဟာမိတ်အဖြစ် ဆက်လက်အသိအမှတ်ပြုထားဆဲပါ။
ဗညားအောင်- ဒါဆို မွန်ဒေသလုံးဆိုင်ရာ ဒီမိုကရေစီပါတီ AMDP အနေအထားကိုရော ?
နိုင်ထောမွန်- ၂၀၁၀ ခုနှစ်ရောက်တော့မှ မွန်ဒေသလုံးဆိုင်ရာ ဒီမိုကရေစီပါတီ AMDP ပေါ်ပေါက်လာတာပါ၊ နောက်ပြီးတော့ သူတို့ရဲ့နိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်ကိုလည်း ကျနော်တို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သိမထားပါဘူး၊ သူတို့အနေနဲ့လည်း ကျနော်တို့နဲ့တွေ့ဆုံဖို့ တောင်းဆိုတာလည်းမရှိခဲ့သလို မဟာမိတ်အခန်းကဏ္ဍကိုလည်း ကျနော်တို့မစဉ်းစားရသေးပါ၊ ပြီးခဲ့တဲ့ကာလတွေမှာ မွန် ၂ ပါတီပေါင်းစည်းကြမယ်လို့ အစည်းအဝေးတွေမှာ ကတိတွေပေးထားကြပေမယ့်လည်း ပေါင်းစည်းရေးက ဖြစ်မလာဘူး၊ ဒါကြောင့်ဒီ မွန် ၂ ပါတီ ၁ ပါတီဖြစ်မလာတဲ့အတွက် ကျနော်တို့အမြင်သဘောထားချမှတ်ခဲ့တဲ့ အမျိုးသားအကျိုးသယ်ပိုးတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်ကနေ ပြန်လည်ရုတ်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။
ဗညားအောင်- လက်ရှိအခြေအနေမှာရော ဘယ်လိုအသိအမှတ်ပြုထားပါသလဲ?
နိုင်ထောမွန်-ဒါပေမယ့် မွန် ၂ ပါတီတစ်ပါတီဖြစ်မြောက်ရေး ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ အမျိုးသားအကျိုးသယ်ပိုးတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်(AMDP) အဖြစ် ကျနော်တို့ပြန်လည်အသိအမှတ်ပြုထားပြီး ပေါင်းစည်းရေးအတွက် ကျနော်တို့ ဆွေးနွေးအဖြေရှာသွားမယ်၊ သို့သော် ဒီ ၂ ပါတီ ဘယ်လိုပေါင်းစည်းကြမလဲဆိုတာကိုတော့ ကျနော်လည်း မပြောနိုင်သေးပါဘူး၊ သံဃာတော်တွေနဲ့ ဆွေးနွေးအဖြေရှာပြီး ဖြစ်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေ ရှာကြံသွားကြမယ်၊ သံဃာတော်တွေချည်းဘဲလည်း မဖြစ်ပါဘူး နိုင်ငံရေးသမားတွေလည်း ပါဝင်ဖို့လိုအပ်တယ်၊ မွန်ဒေသလုံးဆိုင်ရာ ဒီမိုကရေစီပါတီကိုလည်း အမျိုးသားအကျိုးသယ်ပိုးတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုထားပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် မွန်အမျိုးသားပါတီ MNP ဟာ ယခင်ကတည်းက မဟာမိတ်ဖြစ်နေပြီးသားပါ၊ ကျနော်တို့ ၂ ပါတီ မဟာမိတ်ဖွဲ့ပြီးကတည်းက စဉ်ဆက်မပြတ်တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးခဲ့ကြတာပါ၊ တစ်ဘက်ပါတီကိုပဲ ဇောင်းပေးနေတာမဟုတ်ပါဘူး၊ မွန်ဒေသလုံးဆိုင်ရာ ဒီမိုကရေစီပါတီကိုလည်း မဟာမိတ်ပါတီဖြစ်ဖို့ ကျနော်တို့ဆန္ဒရှိပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် ဖြစ်နိုင်မနိုင် ကျနော်တို့ ပြန်လည်သုံးသပ်ရပါမယ်၊ သူတို့ရဲ့ ပေါ်လစီ Policy က ဘယ်လိုလဲ၊ ဒါကို နားလည်းသဘောပေါက်စေလိုတယ်။
ဗညားအောင်- ဥက္ကဌကြီးအနေနဲ့ နောက်ဆုံးဘာတွေဖြည့်စွက် ပြောကြားလိုပါသလဲ?
နိုင်ထောမွန်- ကျနော်တို့တိုင်းပြည် ငြိမ်းချမ်းရေးမရှိရင် အမျိုးသားရေးလည်းဘဲ အောင်မြင်လာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး၊ ဒါကြောင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်ထွန်းစေဖို့ နိုင်ငံရေးပါတီတွေရော နိုင်ငံသားတိုင်းတွေပါ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ကြပါလို့ တစ်ချက်တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးကိုလည်း တန်ဘိုးထားပြီး ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ကြပါ၊ ငြိမ်းချမ်းရေးရရှိဖို့ကိုလည်း ကျနော်တို့တတွေကြိုးပမ်းကြပါ၊ အကယ်၍သာ ငြိမ်းချမ်းရေးရရှိခဲ့ရင် တဆက်တည်းမှာပဲ မှန်ကန်တဲ့နိုင်ငံရေးအဖြေကိုလည်း ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်မှာပါ၊ ဒါမှလည်း နောင်လာနောက်သားတွေရဲ့ အနာဂတ်တွေ တိုးတက်လာမှာပါ၊ အကယ်၍ နိုင်ငံရေးအရပြေလည်မှုမရရှိခဲ့ရင်တော့ ကျနော်တို့နိုင်ငံအတွက် ရင်လေးစရာပါ၊ စစ်ပွဲတွေ ဆက်ပြီး ဖြစ်ပေါ်နေဦးမှာပဲ၊ လက်ရှိ အစိုးရသစ်အနေနဲ့လည်းပဲ ငြိမ်းချမ်းရေးအစစ်အမှန်ကို လိုလိုလားလားရှိတယ်လို့ ပြောဆိုနေတဲ့အတွက် နိုင်ငံရေးအရပြေလည်မှုရှိစေရေး ကျနော်တို့အားလုံးရဲ့ တာဝန်တွေက တစ်နိုင်ငံလုံးအနေအထားအရ တစ်မျိုး၊ မိမိအမျိုးသားရေးကလည်းတစ်ဖက် ညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြပါစို့။
ဗညားအောင်-ဟုတ်ကဲ့ ဥက္ကဌကြီးကို အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျား။
ဗညားအောင် မေးမြန်းချက် 2016-06-08
Tags ဗညားအောင် မေးမြန်းချက်
Previous ဇွန်လ ၁၁ ရက်နေ့တွင် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာမေးပွဲအောင်စာရင်းထွက်မည်
Next UNFC အဖွဲ့အား ယခုလလယ်ပိုင်းတွင် တွေ့ဆုံရန်ဖိတ်ခေါ်ထားသည်ဟု ဦးလှမောင်ရွှေပြော